6 Isbeddellada MarTech ee la isku dayo 2022 | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/6 Isbeddellada MarTech ee la isku dayo 2022
6 Isbeddellada MarTech ee la isku dayo 2022
In ka badan sidii hore, suuq-geynta dhijitaalka ah waxaa hogaaminaya baahiyaha iyo rabitaanka macaamilka.
Macaamiishu waxay rabaan summadaha si ay u keenaan khibrado isticmaalaya tignoolajiyada cusub isla marka la helo.
Marka sidaas la sheego, waxaa lama huraan ah in shirkadaha iyo suuqgeynayaashu ay la socdaan MarTech iyo horumarradii ugu dambeeyay ee tignoolajiyada si ay ugu sii jiraan rajada macaamiisha jira iyo kuwa suurtagalka ah si loo bixiyo khibradaha macaamiisha ee ugu fiican.
Ku guuldareysiga inaad sidaas sameyso waxay kaa tagi kartaa boorka ka dambeeya tartamayaashaada.
Haddaba, aynu u gaadhno, miyaannu gaadhnaa? Waa kuwan lix isbeddel oo MarTech ah oo aad rabto inaad tixgeliso inaad isku daydo markaad u socoto 2022.
#1: Content Interactive
Khibrad gaar ah ayaa lagamamaarmaan u ah jawiga tartanka ee maanta, waana sababta dhabta ah ee boqolkiiba 81 suuqeeyayaashu u sheegaan in nuxurka is dhexgalku uu ka wanaagsan yahay waxyaabaha taagan.
Waxyaabaha is dhexgalku waa mid la dareemi karo. Way ku soo jiidanaysaa mana rabo inay ku fasaxdo.
Infographics, xisaabiyaha, Iyo videos waa qalab aad u fiican soo jiidashada dareenka shaqsiyaadka ka heli-tago iyo abuurista hoggaan aqoon leh.
Iyada oo qayb ka ah istaraatiijiyadda suuq-geynta nuxurka guud, nuxurka is-dhexgalka ayaa kordhin kara codka summadaada iyo joogitaanka khadkaaga.
Fikradda ayaa ah in ugu dambeyntii kor loogu qaado khibrada isticmaalaha iyadoo la adeegsanayo xalalka bixiya wax ka badan oo kaliya macluumaadka taagan.
Waa muhiim in aad taxaddar u yeelatid xulashada qaabka saxda ah ee nuxurka isdhexgalka ee marxalad kasta oo ka mid ah marinka iibka, sababtoo ah tani waxay kordhin doontaa fursadaha u beddelashada rajada iibsade.
Mawduuca is-dhexgalku wuxuu ku yimaadaa qaabab badan, oo ay ku jiraan:
Codbixinta iyo sahaminta
Warbaahinta dhabta ah ee la kordhiyay
360º fiidyowyo is dhexgal ah
Markaad abuurto nuxur is-dhexgal ah, hubi inaad haysato naqshad adag, khariidad baahiyaha macmiilkaaga, oo ka dhig waxa ku jira mid la wadaagi karo. Tani waxay kordhin doontaa heerka guushaada guud.
In kasta oo halkan lagu taxay isbeddel ahaan, nuxurka is-dhexgalka ayaa si dhakhso ah u noqonaya hal-abuurka MarTech iyo warshadaha Suuqgeynta Dijital ah.
#2: Xaqiiqda Dhabta ah
Xaqiiqda dhabta ahi maaha fikrad cusub, laakiin waa ciyaaryahan ku cusub warshadaha suuqgeynta.
Tan iyo markii la aasaasayna, waxa hubaal ah inay cirka isku shareertay. Suuqan xaqiiqada dhabta ah ayaa la saadaalinayaa inuu kori doono ilaa $209 bilyan sanadka 2022.
Tani maahan wax lama filaan ah, iyadoo la arkayo sida dunidu ay u rogmatay sababo la xiriira masiibada COVID-19 markii wax walba ay isu beddeleen dhijitaal iyo "dhab ah".
Isticmaalka xaqiiqada dhabta ah ee suuq-geyntu waxay u oggolaanaysaa summadaha inay xakameeyaan farqiga taas oo lagu meeleeyay inta u dhaxaysa ficilka iyo khibrada isticmaalaha.
Waa tignoolajiyada casriga ah taas oo awood u leh in ay si dhab ah u carqaladeyso safarka macaamiisha oo isla markiiba u beddesho iibsadaha.
Xaqiiqda dhabta ah waxaa loo isticmaali karaa in lagu bixiyo waayo-aragnimo dhijitaal ah macaamiisha beddelkeeda mid jireed, kor u qaadida adeeg ama badeecad.
Xitaa waxaa loo isticmaali karaa in lagu muujiyo habka horumarinta ama u oggolow macaamiisha inay arkaan sida badeecad gaar ahi u ekaan doonto gurigooda ka hor inta aanay wax iibsan.
Ugu dambeyntii, suuqgeynta dhabta ah ee dhabta ah waxay kuu keentaa macaamiisha halkii aad u baahan lahayd inaad ku bixiso dadaal xad dhaaf ah si aad iyaga kuugu soo jiidato.
#3: Hooseeya iyo Platform-ka Koodhka
In kasta oo aadan u baahnayn inaad khabiir IT ah noqoto in muddo ah si aad natiijooyinka u keento, tirada aaladaha hoose iyo kuwa aan lahayn koodka ee laga heli karo farahaaga waa badan yihiin - tiradanina way sii kordheysaa sannad kasta.
Suuqan gaarka ah ayaa la filayaa inuu kor u dhaafo $21 bilyan marka la gaaro 2022, iyo 75% ganacsiyada ayaa la filayaa inay adeegsadaan goobo hoose oo aan lahayn kood.
La yaab ma leh inay samaysay liiska isbeddellada ugu sarreeya ee MarTech si ay isugu daydo 2022!
Qalabkan, waxaad horumarin kartaa codsiyada farsamada, sida database-yada, website-yada, chatbots, iyo apps, oo leh gabi ahaanba eber aqoontii hore ee barnaamijka.
Barnaamijyada noocaan ah, caqabadaha farsamada ayaa hoos loo dhigayaa. Intaa waxaa dheer, waxaad heleysaa xawaaraha gudbinta ee codsiyada, hoos u dhaca kharashyada, iyo wax soo saarka sare.
Maskaxda ku hay in aad ku heli karto natiijooyin degdeg ah oo leh aalado kood hooseeya oo aan lahayn, laakiin barnaamijka oo yar awgeed, ikhtiyaarrada shakhsiyaynta ayaa xaddidan.
Goobaha hoose iyo kuwa aan koodka lahayn ayaa abuuraya fursado waxna ruxaya, maadaama ay leeyihiin karti-wax-ku-ool ah si ay uga caawiyaan ganacsiyada inay helaan tartan badan.
#4: Helitaanka Xogta iyo Platformyada Xogta Macmiilka
Waxay u badan tahay inaad maqashay: mustaqbalku buskud la'aan. Ma aha dareenka shukulaatada-chip buskudka, laakiin dhinaca saddexaad ee xogta macmiisha ay wado.
Horraantii 2022 ka dib, isla marka Google uu dhammeeyo wajigiisa, ma jiri doono xog kale oo macmiil ah oo dhinac saddexaad ah oo ay heli karaan ganacsiyada.
Darowsarrada kale, sida Firefox iyo Safari, ayaa horey u qaaday tillaabooyin ay meesha uga saarayaan dabagalka buskudka qolo saddexaad.
Kukis la'aanteed, aad bay u adkaan doontaa in la helo aragti habdhaqanka macaamilka. Si kastaba ha ahaatee, taasi macnaheedu maahan wax aan macquul ahayn.
Taa beddelkeeda, ganacsiyadu waxay si fudud ugu baahan doonaan inay raadiyaan xeelado cusub si ay u helaan xogta macaamiisha, taas oo macnaheedu yahay in la helo habab lala xiriiro macaamiisha jira iyo kuwa mustaqbalka.
Platforms Xogta Macmiilka ayaa loo isticmaali doonaa si joogta ah iyo si xeeladaysan si loo abuuro aragtida macaamiisha.
Kuwani waxay si cajiib ah faa'iido u yeelan karaan helitaanka xogta iyo abuurista profiles gaar ah macaamiisha gaarka ah ee hal database.
Maadaama aysan jiri doonin buskud qolo saddexaad ah oo loo isticmaalo in lagu codsado oggolaanshaha macmiilka macluumaadkooda, waxaa jiri doona walaacyo gaar ah oo isticmaalka CDPs 2022 iyo wixii ka dambeeya.
Si kastaba ha ahaatee, inta badan, xogta lagu isticmaalo CDP-yada waa eber ama xogta kooxda koowaad, sida wargeysyada, ra'yi ururinta, sahaminta, e-maillada daba-galka ah, iwm.
#5: Platforms Suuqgeynta Saamaynta
Keenista saameeyayaasha iyada oo qayb ka ah istaraatiijiyada suuqgeynta guud waxay ka caawin kartaa sumaddaada inay gaarto dhagaystayaasha aad haddii kale waligaa gaadhin.
Tani waxay u badan tahay sababta 65% ganacsiyada ay damacsan yihiin inay kordhiyaan qaybtan miisaaniyadooda horay u socota iyo sababta suuqa la filayo inuu gaaro $ 15 bilyan marka la gaaro 2022.
Nasiib darro, waa geeddi-socod waqti-dheer leh.
Si suuqgeyntu u noqoto mid wax ku ool ah, waa inaad heshaa saamaynayaal ku habboon kuwaas oo haysta tirada ugu yar ee raacsan, la xiriir iyaga oo u sii maraya DM ama iimaylka mid-mid-mid ah, kala xaajoonaya shuruudaha/qiyaasta heshiiska, ka dibna raad raac Natiijooyinka si gaar ah qof kasta oo saameeya.
Iyadoo faa'iidooyinka ay jiraan, ganacsiyada qaar ma rabaan inay ku qasmaan.
Nasiib wanaag, waxaa jira dhowr goobood oo suuqgeyneed oo saameyn ku leh suuqa oo soo galaya si aad culaab garbahaaga uga qaaddo.
Goobahani waxa ay fududeeyaan in la helo raad-bixiyeyaal u shaqayn doona summadaada lana xidhiidh iyaga.
#6: Dhacdooyinka Isku-dhafka ah
Markii COVID-19 masiibada uu xirtay asal ahaan wax walba laga bilaabo bandhigyada tooska ah ilaa bandhigyada farsamada gacanta, dadku aad ayay u xumaadeen. Meherado badan ayaa soo gaaray guulo waaweyn.
Inkasta oo shirkaduhu ay si tartiib tartiib ah u soo kabanayaan oo dhacdooyinka waaweyni ay bilaabayaan in mar kale loo ogolaado, xaqiiqadu waxay ahaanaysaa: waxba mar kale isku mid noqon maayaan.
Mid ka mid ah, macaamiisha qaar ayaa weli ku raaxaysan joogitaanka dad badan. Waxaa jirta fursad wanaagsan in caqiidadani ay sii socoto in muddo ah, haddaysan ahayn weligeed.
Haddaba, ganacsi ahaan, sidee uga jawaabtaa? Sideed ganacsigaaga u ilaalinaysaa? Sideed wax ugu qabataa labada nooc ee macaamiisha: kuwa raba inay guriga ku nagaadaan iyo kuwa raba inay ka soo qaybgalaan munaasabadaha la soo agaasimay (iyado weli ammaan ku sii jira)?
Dhacdooyinka isku-dhafka ah.
Maskaxda ku hay in dhacdo isku-dhafan aysan macnaheedu ahayn si fudud bandhigyada qulqulka qof guriga jooga.
Dhacdada isku-dhafka ah waa halka ka-qaybgalaha khadka uu helo khibrad la mid ah ka-qaybgalaha gudaha, taas oo macnaheedu yahay inay helaan isku-dhex-gal, fursado isku-xirnaan, iwm.
Abuuritaanka dhacdo isku-dhafan ayaa kaa caawin doonta inaad la kulanto baahiyaha dhammaan macaamiishaada jira iyo kuwa mustaqbalka leh.
Tani waa dhab ahaan waxa Kulanka Xirfadlayaasha Caalamiga ah ay ku sameeyeen WEC Grapevine markii dhacdooyinka qof ahaaneed loo oggolaaday inay soo laabtaan sannadkii hore.
Waxa jiray laba dhacdo oo isku mar la qorsheeyay oo si fiican loo fuliyay. Waxaa xaflada ka soo qayb galay 700 oo qof iyo 1,000 qof oo si toos ah uga soo qayb galay xaflada.
Isku soo wada duuboo, xafladani waxay ahayd mid guul wayn ku soo idlaatay, iyadoo qof walba siisay khibrad amaan iyo yaab leh.
Waxaa jira, dabcan, caqabado ku wajahan qorsheynta dhacdo si toos ah guriga iyo qof ahaan loogu nool yahay.
Si kastaba ha ahaatee, dhacdo isku-dhafan oo sidan oo kale ah waxay hubisaa in qof kastaa tago isagoo ku qanacsan iyadoo sidoo kale la siinayo summado leh dad badan oo dhagaystayaal ah, kor u kaca ROI, iyo xog qotodheer oo xog ah.
Waa muhiim in la maareeyo waxyaabaha laga filayo goobta oo aad doorato inaad la shaqeyso bixiyaha goobta saxda ah si ay dhageystayaasha muuqaalka ah iyo kuwa gudahaba ay u helaan waayo-aragnimo soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh.
Isku soo wada duuboo: Kasbashada Aragtida Isbeddelladan MarTech
Isbeddellada MarTech ayaa ah diiradda koowaad ee ganacsiyada 2022, maaddaama kobaca ganacsigu uu noqon doono mudnaanta sanadka cusub iyo agabka suuqgeynta horumarsan ayaa gacan ka geysan kara gaaritaanka yoolalkan.
Muddo dheer ka hor, dadaal kasta oo suuqgeyn la xiriira ayaa ku tiirsanaan doona xalalka MarTech. Nasiib darro, ma jiraan ganacsiyo ku filan oo yaqaana ilahan ama sida saxda ah loo hirgeliyo si loo xaqiijiyo guusha.
Akhbaarta wanaagsani waxay tahay inaysan u dhowayn sida uu qofku u malaynayo.
Markaad bilawdo sanadka cusub oo aad eegto inaad ganacsigaaga u keento heerar cusub oo korriin iyo guul, tixgeli inaad hirgeliso istiraatiijiyad suuqgeyn cusub.
Fiiri tan bilaashka ah Xidhmada Qorshaynta Suuqgeynta 2022 taasi waxay kaa caawin doontaa inaad bilowdo qorsheynta sanadkaaga ugu fiican weli!
41 Madadaalo, Bilaash ah & Diyaar u ah in la Daabaco Qoraalada Baraha Bulshada ee Kirismaska ​​( Qaababka Canva!)
Waa maxay Domain Extensions? (iyo sida loo doorto Domain Extension)